Efijery fitaratra Mac ho an'ny Smart TV | Avy amin'ny mac aho
Jose Alfocea | | Fampiharana hafa ho an'ny Mac, Tutorials
Tianao fitaratra Mac ny fahitalavitra Smart? Na dia marina aza fa mandraka ankehitriny dia azo atao ny mampifandray ny rafitra fiasa OS X amin'ny Samsung Smart TV anao amin'ny alàlan'ny haitao AirPlay amin'ny fitaovana Apple, raha ilaina dia ilaina ny manana Apple TV.
Amin'ity fampiharana vaovao ity dia ho azo atao izany fitaratra efijery Mac OS X ary jereo ny rafitra amin'ny alàlan'ny Samsung Smart TV mifanentana, manao fametrahana tsotra sy mampifandray ny fitaovana roa amin'ny tambajotra iray ihany.
AirPlay ahafahan'ny mpampiasa mitantana sy mizara haingana ny mozika, sary ary horonan-tsary tsy misy tariby eo anelanelan'ny fitaovana, mandefa mozika mankany amin'ny Airport Express, ary ny efijery fitaratra hatreto amin'ny alàlan'ny Apple TV.
1 Araraoty tsara ny AirPlay amin'ny fahitalavitra Smart
2 Mampiasa Apple TV + AirPlay
4 Mampiasa Google Chromecast
Araraoty tsara ny AirPlay amin'ny fahitalavitra Smart
Ny mpandefa AirBeamTV BV dia nandefa Mirror ho an'ny Samsung TV, izay azo alaina ao amin'ny App Store ankehitriny, hanamorana ny fitaratra tsy misy Apple TV. Raha manana Samsung Smart TV ianao manomboka amin'ny 2012 na taty aoriana ary Mac OS X 10.10, dia afaka mampiasa Mirror for Samsung miaraka amin'ny mifanentana indrindra ianao.
Tsy maintsy mampifandray ireo fitaovana roa fotsiny ianaoianao amin'ny tambajotra wifi iray ihany sy ny sisHikaroka ho azy ny fahitalavitra Smart ny lohahevitra. Raha vao hita ao amin'ny lisitry ny fitaovana mifandrayNy sisa ataonao dia ny mifantina azy ary manomboka ny fizotran'ny fitaratra. Mampitandrina ireo mpandrindra fa mety misy a fanemorana hatramin'ny 3 segondra ary, raha lava kokoa ny fotoana, dia manolo-kevitra izy ireo ny hanova ny tahan'ny famatrarana ny sary.
Mirror for Samsung TV koa mamela anao hisafidy ny fampisehoana monitor mifandray amin'ny Mac-nao sy safidio ny loharanom-peo: mamerina ny feo avy amin'ny solosaina na amin'ny alàlan'ny mpandahateny amin'ny fahitalavitra Smart.
AirBeamTV BV dia manolotra a free download ary kinova fitsapana avy hatrany azonay ampiasaina mandritra ny 2 minitra, fotoana ampy hijerena ny fampiononana sy ny fahombiazan'ny fampiasana azy. Ny kinova feno dia amin'ny App Store amin'ny € 9,99 fa safidy tena atolotra ho an'ny fitaratra Mac ny fahitalavitra Smart avy amin'ny Samsung.
Mampiasa Apple TV + AirPlay
Raha tsy mifanentana mivantana amin'ny haitao AirPlay an'ny Apple ny fahitalavitra Smart anao na manana fahitalavitra mahazatra tsy "marani-tsaina" fotsiny ianao, dia raikipohy iray hafa izay ahafahanao mamadika ny efijery an'ny Mac amin'ny fahitalavitrao dia mampiasa Apple TV.
Afaka mampiasa ianao misy Apple TV taranaka faharoa, fahatelo na fahefatra, miaraka amin'ny tombony azo ahazoana ny roa voalohany amin'ny vidiny lafo eo amin'ny tsena faharoa.
Raha vao manana ny Apple TV ianao dia mila fotsiny ampifandraiso amin'ny tariby HDMI amin'ny fahitalavitrao ary alao antoka fa eo ambanin'ny tambajotra WiF iray ihany izy ioizay ampifandraisin'ny Mac anao.
Manaraka, tsindrio ny mari-pamantarana AirPlay hita ao amin'ny baran'ny menio ao amin'ny Mac anao, safidio ny Apple TV anao ary, eo ho eo dia hiseho amin'ny fomba lehibe amin'ny fahitalavitra ny efijeryo solosainao.
Raha toa ianao ka mijery horonantsary avy amin'ny YouTube, A3Player, Mitele, Netflix na serivisy hafa, dia azo inoana fa hiseho ao amin'ny fikandrana playback ilay mari-pamantarana AirPlay. Tsindrio izany, safidio ny Apple TV, ary halefa amin'ny fahitalavitrao ilay horonan-tsary. Mandritra izany fotoana izany, azonao atao ny manohy mampiasa ny Mac anao toy ny mahazatra.
Niresaka momba ny "Mirror for Samsung TV" izahay, ary koa momba ny safidy hanambatra ny AirPlay amin'ny Apple TV, saingy misy safidy maro hafa, ohatra, AirParrot 2.
AirParrot no fitaovana mety ho an'ireo izay manana solosaina Mac tranainy kokoa izay tsy manohana ny haitao AirPlay. Amin'ity fampiharana ity dia ho azonao atao ny mandika ny efijery an'ny Mac amin'ny fahitalavitra anao, manitatra ny efijery an'ny Mac anao, mandefa horonan-tsary hijerena azy eo amin'ny efijery lehibe, ary koa handika ireo rindranasa tsirairay avy.
Tombony iray hafa amin'ny AirParrot 2 ny hoe Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny Apple TV sy amin'ny fitaovana Chromecast na amin'ny mpandahateny mifanentana amin'ny AirPlay handefa ny mozikao. Ary, ho fanampin'izany, mandefa hatramin'ny kalitao 1080p izy io ary azonao ampifandraisina miaraka amin'ny mpandray maromaro.
Ary raha tsy dia azonao antoka fa io no vahaolana ilainao dia azonao atao izany misintona kinova fitsapana hafitoana maimaimpoana eto, ary avy eo manapa-kevitra ianao raha hividy ilay fampiharana na tsia.
Mampiasa Google Chromecast
Safidy iray hafa ahafahanao manitatra ny birao misy ny Mac anao na mandika ny efijery an'ny Mac amin'ny fahitalavitra anao na monitor ivelany, dia amin'ny alàlan'ny fitaovana Google Chromecast miaraka amin'ny fampiharana Air Parrot izay vao hitantsika tamin'ny antsipiriany.
Ho an'ny Mac efa zokinjokiny izay tsy manana fanohanan'ny teknolojia AirPlay, Ity kombina ity dia ho mora kokoa noho ny Apple TV + Air Parrot 2 Na dia, eny, fantatrao fa tsy misy zavatra takatra tsara amin'ny fitaovana Apple noho ny fitaovana Apple hafa.
Izany dia nilaza fa ny hany ilainao dia ny mividy fitaovana Google Chromecast ary mampifandray izany amin'ny fahitalavitrao ary amin'ilay tamba-jotra Wi-Fi mitovy amin'ny an'ny solosainao. Vantany vao vita izany, dia efa fantatrao ny fomba fiasan'ny Air Parrot 2: tsindrio ny kisary ao amin'ny baran'ny menio ao amin'ny Mac anao, safidio ny fitaovana Chromecast ary azonao atao ny manitatra ny efijery an'ny Mac anao, mamerina azy na mandefa fampiharana manokana na ny audio fotsiny.
Ary mifarana amin'ny Serviio, fampiharana iray izay azonao atao mizara atiny amin'ireo fitaovana hafa mifandraika amin'ilay tambajotra iray ihany ka raha manana sarimihetsika, andian-tsary, sary, mozika sy maro hafa amin'ny Mac ianao, dia azonao atao ny milalao azy ireo amin'ny fahitalavitra Smart tsy mila tariby. Ny tsy fitoviana lehibe dia ity fampiharana ity dia tsy ho azonao atao ny mamerina ny efijery an'ny Mac amin'ny fahitalavitra anao, fa mandefa atiny kosa, fa raha io no notadiavinao, dia ho tsara izany satria tsy mila Apple ianao TV, Chromecast na AirPlay, ity fampiharana ity ihany no azonao atao misintona avy amin'ny tranonkala ofisialiny ary ampiasao ho fitsarana maimaimpoana mandritra ny dimy ambin'ny folo andro ...
Raha manapa-kevitra ny handefa ny fahitalavi-tenany manokana i Apple indray andro, dia azo inoana fa azontsika atao ny manao kopia mora kokoa ny efijery an'ny Mac antsika ary tsy miankina amin'ny kojakoja na fampiharana an'ny antoko fahatelo, amin'ny tsindry tsotra fotsiny izany, eny, fantatrao fa raha misy Andro ity vokatra ity dia natomboka, tsy ho izy fahitalavitra mora vidy ary tsy maintsy mandoa vola be isika amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Fampiharana hafa ho an'ny Mac » Mirror Mac Screen amin'ny Smart TV
Txarli dia hoy izy:
Mahaliana, raha mandray an-tsoratra ny LG ary manome antsika tsy ampoizina
Valiny tamin'i Txarli
Ary farany zavatra mandeha amin'ny Sansumg-ko !!!! Tena mendrika izany ary mandeha tsara tokoa izy, efa nampiasa ny kinova andrana aho ary efa nolazaiko taminao fa mahafinaritra izany, koa raha re ny feo amin'ny fahitalavitra dia mila mametraka plugin ianao, AirBeamTV, ary aorian'izany ianao afaka mihaino ny fahitalavitra tsy misy olana !! Fantastic !!!
Mila maneho hevitra aho fa tsy dia eo anelanelan'ny solosaina sy ny fahitalavitra izany satria efa naneho hevitra ny developer fa tsy zavatra mampatahotra ahy izany, ka saika manam-potoana handry eo amin'ny farafara ianao, hahahaha.
Hividy azy io aho izao. Misaotra tamin'ny fanamarihana SOYDEMAC.
PS: Ny fahitalaviako dia Sansumg UE46D6100 ary raha tadidiko tsara dia alohan'ny 2012 izany.
macoyvergaray dia hoy izy:
@juancagr taiza no nahazoanao ny kinova fitsapana? Te hanandrana aho.
Mamaly an'i macoyvergaray
Marcelo campusano dia hoy izy:
tsotra indrindra: ampiasao Vuze (DLNA Server)
Valiny tamin'i Marcelo Campusano
fer rivera dia hoy izy:
alohan'ny hifandraisako amin'ny alàlan'ny hdmi avy amin'ny thunderbolt. tsy azo atao izao ... mety ho noho ireo fampiharana fandoavam-bola vaovao ireo ????
Mamaly an'i fer rivera
Álvaro Marín Ordóñez dia hoy izy:
Mamaly an'i Álvaro Marín Ordóñez
Raha mila seranana HDMI amin'ny MacBook 12-inch ianao dia ity misy safidy iray hafa